Muqdisho oo maanta ay ka dhoofeen 125 arday oo ka mid ah kuwii helay deeqdii waxbarasho ee Turkiga. – Radio Daljir
Galkacyo, Oct 07 ? Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dhoofay qaar ka mid ah ardaydii dhawaan ku guulaystay imtixaannadii loo galay deeqdii waxbarasho ee ay bixisay dawladda Turkiga, kuwaasi oo ay tiradoodu dhammayd 125 oo arday.
Arday maanta ka dhooftay magaalada Muqdisho ayaa si toos ay uga degi doona dalka Turkiga oo bixiyey deeqda waxbarasho, waxaana ardaydaani ay iskugu dhafan yihiin kuwo ka baxay dugsiyada sare ee dalka una socda jaamacado iyo ku dhammaystay dugsiyada dhexe, Turkigana ka bilaabi doona aqoonta dugsiyada sare.
Tiradaan araday ah ee maanta la qaaday ayaa ka soo kale jeedo gobollo kala duwan oo dalka ka mid ah, kuwaasi oo imtixaanna deeqda waxbarasho ee Turkiga ku kala galay Puntland, Somaliland iyo magaalada Muqdisho.
Ardayda maanta la qaaday waxaa ka sii horreeyey arday kale oo tiradoodu dhammayd 34, kuwaasi oo dhammaantood ahaa reer Puntland, lagana kala xushay gobollada Puntland.
Sikastaba ha ahaatee ardayda ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho ku sii sagootiyey mas?uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka kuwaasi oo ku dhiirro-galiyey ardayda kororsiga aqoontooda waxbarasho, kulana dardaarmay wax-u-qabashada dalkooda hooyo.